भारतीय योगगुरु रामदेव पक्राउ ? दिए सरकारलाई यस्तो चे’ता’व’नी – Paluwa Khabar
भारतीय योगगुरु रामदेव पक्राउ ? दिए सरकारलाई यस्तो चे’ता’व’नी
जेठ १५, २०७८ शनिबार 20
भारतमा योगगुरु रामदेव फेरि पनि विवादमा परेका छन् । यसअघि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे भ्रम फैलाएसँगै विवादमा मुछिएका उनी पछिल्लो समय भने आधुनिक औषधिको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको कारण विवादमा मुछिएका हुन् ।
हालै मात्र रामदेवले दिएको एक अभिव्यक्तिमा उनले आधुनिक औषधि लिएका हजारौं मानिसहरु कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको बताएका थिए । साथै अक्सिजन सिलिण्डर पाउने प्रयास गरिरहेका मानिसहरुको मजाक उडाएका थिए ।
भारतको स्वास्थ्य प्रणालीको लागि आधुनिक र विज्ञानमा आधारित औषधि मेरुदण्डको रुपमा रहँदै आएको छ । तर, भारतमा वैकल्पिक आयुर्वेद र होमोप्याथी पनि निकै लोकप्रिय छ । रामदेवजस्ता धेरै गुरुहरुले आयुर्वेदिक औषधि र अन्य उत्पादनहरु बिक्री गरेर राम्रो व्यवसाय पनि चलाइरहेका छन् ।
रामदेवले आधुनिक औषधिको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिपछि पक्राउको चर्को दबाब आएसँगै रामदेवले आफूलाई पक्राउ गर्न सरकारलाई नै चुनौती दिएका थिए । उनले एक भिडियोमा भनेका छन्, ‘पक्राउ त स्वामी रामदेवलाई तिनीहरुको बाबुले पनि गर्न सक्दैनन् । तर, हल्ला गरिरहेका छन् कि छिटै रामदेवलाई पक्राउ गर । कहिले के हल्ला चलाउँछन्, कहिले के हल्ला चलाउँछन् । कहिले ठग रामदेव, कहिले महाठग रामदेव त कहिले गिरफ्तार रामदेव । उनीहरुले हल्ला गर्दै गर्छन् गर्न देऊ ।’
Prevपेट दुखेर अस्पताल पुगेका पुरुषको गर्भवती भएको रिपोर्ट आएपछि [भिडियोसहित]
Nextएसईई नहुने सम्भावना!! भयो यस्तो निष्कर्ष!!
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षा मिती तोक्यो, यति गतेबाट सुरू हुदै परीक्षाहरू?
कति दिन बाच्छ काेेेेेेेराेना भाईरस
पूर्वराजाले हिन्दी बुझ्दिन भनेपछि भारतीय पत्रकारले कुन भाषामा सोधे प्रश्न?
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (402)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (269)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (265)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (254)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (245)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (231)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (220)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (218)
के तपाईँ घर बसीबसी चा’लक अनुम’तिपत्र लिन चाहनुहुन्छ ? यसरी आजै आवेदन दिनुहोस्
५ बहिनीमा ३ बहिनीको पहिरोले ज्यान लिएपछि श’व बोक्दै दिदिहरु
१.	भद्रकालीमा धर्ती माताको आठौ दिनमा यस्तो अनौठो भयो, माता नाग बनेपछि हेरेको हेरै भए सबै(भिडियो) (50)
२.	बर्दियामा बँदेललाई थापेको वि’द्युतीय पा’सोमा परेर एकै परिवारका तीन जनाको ज्या’न गयो (44)
३.	बिश्वकर्मा पुजाको दिन धर्ती माताले देखाइन यस्तो ताण्डब, रुखमा चढेर अरु पनि गरिन यस्तो , हेर्नुहोस् भिडियो सहित (37)
४.	श्रीमतीको निधन हुँदा सँगै सुतेका श्रीमानले किन थाहा पाएनन् ? ८ दिन हुँदा पनि उठेन शव, श्रीमान र अमाजु पक्राउ (36)
५.	बाहिरियो पुरै भिडियो : पानीले उनको पुरै खुटा भिजि सकेको , संगै गएका दुई साथीहरु मिडियामा (भिडियो) (35)
६.	सिद्धार्थ जस्तै देखिने यी युवक, सिद्धार्थको मृ त्यु पछि यसरी एकाएक आए अगाडि,सिद्धार्थको झल्को यसरी मेटाए (32)
७.	संखुवासभा घटना : कहाँ हरायो रञ्जनाको फोन ? फोन खोज्दै प्रहरी (32)
८.	श्रीमान बिदेशमा नेपालमा श्रीमती प’रपुरुष संग भा’गिन् छोरीको बि’चल्ली, श्रीमान भन्छन् छोरिको भ’विष्यको लागि भएपनि फेरि राख्ने (भिडियो ) (32)